हराएका पासपोर्ट यसरी बेचिन्छन् बजारमा | abc.com.np
राज्यको जिम्मेवार निकाय पनि पत्रिकामा प्रकाशित बिज्ञापनलाई आधार मानेर पासपोर्ट हराएको भन्दै अर्को प्रतिलिपी दिन तयार हुन्छ । स्रोत भन्छ, ‘हराएको भनिएका राहादानी ५ प्रतिशत पनि हराएका हुदैनन् । ब्यक्तिले बिदेश जान मेनपावर कम्पनीमा बुझाएका हुन्छन् । पछि कुनै कारणवश भिषा रद्ध गर्नु पर्ने हुन्छ । भिषा रद्ध गर्न जाँदा कम्पनीले भिषा प्रक्रिया भइसकेको भन्दै ३० देखि ४० हजार रुपैंयाँ माग्ने गरेका कारण राहादानी हराएका ब्यक्तिले नयाँ निकाल्न विज्ञापन दिने गर्छन् ।’ अब प्रश्न उठ्छ छ कि जफत भएका राहादानी मेनपावर सञ्चालकले के गर्छन त ? गत साता मात्र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा हनुमानढोकाले पासपोर्टमा फोटो परिवर्तन गरि कुँबेत पुगेर नेपाल आएकी बिना परिवारलाई पक्राउ गर्‍यो । कास्कीकी विनाले ईलामकीे हर्कमाया राईको पासपोर्टमा आफ्नो फोटो राखि कुँवेत गएको रहस्य खुल्यो । नेपाल फर्किदा मात्र उनी प्रहरीको फन्दामा परिन् ।
प्रहरीले ईलामकी राईको पासपोर्ट कसरी बिनाको हातमा आयो ? कसले उपलब्ध गरायो ? अनुसन्धान नै गरेन । त्यस्तै, एक साता अघि विदेश जान लागेका युवाबाट संकलित राहादानी चोरी भएको भन्दै पासपोर्ट बंगलादेशी नागरिकलाई विक्री गर्ने मेनपावर सञ्चालकलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूराले पक्राउ गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । भिषा र श्रम बिभागबाट अन्तिम स्वकृति लिईसकेका राहादानी चोरी भएको भन्दै बंगालादेशी नागरीकलाई बेच्ने मेनपावर सञ्चालकले विभिन्न ब्यक्तिहरुबाट लिएका पासपोर्ट पनि विक्री गरिरहेका हुन्छन् । बेलाबेलामा प्रहरीले पासपोर्टमा फोटो परिबर्तन (पीसी) गरी विदेश पुगेकालाई पक्राउ गरेबाट पनि सो कुरा पुष्टि हुन्छ । पक्राउ परेकाहरुले विभिन्न ब्यक्तिका नाममा पासपोर्ट मेनपावरबाटै उपलब्ध गराउने गरेको बयान दिदै आएका छन् । त्यस्तै, बिदेशमा मृत्यु भएका भनिएका ब्यक्ति नेपालमा जुउँदै भएको समाचार पनि सार्बजनिक हुँदै आएको छ ।
यि उदाहारणबाट के प्रष्ट हुन्छ भने हराएका पासपोर्ट मेनपावर कम्पनीले बजारमा बेचेका हुन्छन् । ब्यूरोले राहादानी बेचबिखनमा संलग्न भएको आरोपमा खोटाङ दिक्तेलका कुमार पुरी र संखुवासभा वानाका पुर्णबहादुर मगरलाई एक साताअघि पक्राउ गरेको थियो । विदेश पठाउने भन्दै संकलित भएका २५ जना नेपाली कामदारहरुको सक्कली राहादानी एनसिएफ इम्प्लोएमेन्ट सर्भिस प्रालीका संचालक देवीप्रसाद काफ्ले र अलजरिफा मेनपावरका कुमार पुरीले मगरमार्फत बंगलादेशका मोहमद डेलावर हुसेनलाई बिक्री गरेको ब्यूरोको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । उनीहरुले साउदी अरवको भिषा र वैदेशिक रोजगार विभागबाट अन्तिम स्वीकृति समेत लिईसकेका थिए ।
ति पासपोर्टहरु गौशाला बत्तिस पुतलीस्थित रहेको होटल द्धारीकाजबाट चोरी भएको भन्दै बंगालादेशी नागरिकलाई विक्री गरेका थिए । गिरोहले नेपाली पासपोर्ट पीसी गरी बंगलादेशी नागरिकलाई साउदी अरव पठाउने गरेका छन् । पासपोर्ट बिक्रिपछि गत माघ २० मा पुरीले राहदानी द्धारिकाज होटलको पार्किङस्थलमा रहेको बा.३ च ७२५६ नम्बरको प्राईभेट कारबाट चोरी भएको भन्दै महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालामा निवेदन दिएका थिए । ब्यूराको अनुसन्धानले उक्त दिन होटेलको पार्किङस्थलबाट कुनै पनि चोरीको घटना नभएको पुष्टि भयो । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने हराएको भन्दै पत्रपत्रिकामा प्रकाशित राहदानी पीसी गरेर अन्य मुलुका नागरिक विदेश पठाउने प्रयोजनका लागि बजारमा विक्री भइरहेका छन् ।